मदन लम्साल | गृहपृष्ठ | Page 3
मदन लम्साल Articles 79
सरकारले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा (सासु) योजना’को भव्य घोषणा गरेको छ । यो योजनाअनुसार त अब सरकारसँग छेलोखेलो पैसैपैसा जम्मा हुने भो । करबाट उठ्ने पैसो । सासु र रासु (राष्ट्रिय सुरक्षा) कोषमा उठ्ने पैसो । अझ विदेशी लगानी सम्मेलन गर्ने कुरो पनि छ क्यारे । त्यसबाट उठ्ने पैसो पनि जोड्ने हो भने त ⁄ अनि हुँदैन त अब नेपाल समृद्ध ? समृद्ध नेपालको हल्ला अहिले व्यापक छ । सरकारले पोलमा पनि सरकार लेरायो, पत्रिकाका पेजमा पनि सरकार देखायो । फेसबुके, ट्व...	बिस्तृतमा
समृद्धि पहिले माथिबाट ल्याऊ
राष्ट्रपतिका लागि यसो एउटा १८/२० करोड पर्ने गाडी किनेर दिने कि भन्ने प्रसङ्ग के चल्याथ्यो, सबै तिरबाट यसको विरोध पो शुरू भयो बा ! अब राष्ट्रपति जस्तो देशको प्रमुखलाई के साइकल किनेर दिने त ? देशलाई समृद्धितिर डोर्‍याउने भनिरा बेला देशमा एक जनालाई जाबो एउटा लामो गाडी किन्दिने कुरा मात्र गर्दा यत्रो कोकोहोलो किन होला ? ३ करोड जनतामा प्रत्येकले ६ रुपैयाँ दिए पनि एउटा राष्ट्रपतिका लागि एउटा नयाँ गाडी आइहाल्ने रैछ । त्यसैले, यति सानो कुरालाई पनि किन ठू...	बिस्तृतमा
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर साहबले शान्ति र समृद्धि दुईटी एकैचोटि ल्याउने भनेर साढे ३ घण्टा लगाएर झण्डै ३ किलोमिटर बाटोमा घस्रिएछन् । घाटमा गएर छठपूजा पनि गरेछन् । प्रम ओलीको समृद्धि अभियानमा साथ दिने मेयरको यो अथक कदमलाई साङ्केतिक रूपमै भए पनि ठूलै योगदान मान्नुपर्छ । तर, अन्य मेयर, उपमेयर र खासगरी प्रदेशका मुम र म (मुख्यमन्त्री र मन्त्री)हरू भने प्रमको सपनालाई सार्थक बनाउन त्यति लागेको देखिएनन् है ! त्यसैले, सरकारले सबै तिरबाट आलुचना खाइरहनु प...	बिस्तृतमा
सबै युवा विदेश लखेटौं
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले छलाङ मारे, नेपाली बेरोजगार युवालाई करीब सित्तैमा मलेशिया काम गर्न जान पाउने श्रम सम्झौता गर्दिएर । अब यति भएपछि नेपालीहरुको भाग्योदय भयो । पहिले पहिले केटाहरु लाखौं रुपैयाँ दलालहरुलाई बुझाएर जान्थे । अहिलेका युवाका पुर्पुरो बलियो रैच । सित्तैमा अर्थात् सुको नतिरी विदेश जान पाउने भए । न प्लेनको टिकट किन्ने झन्झट, न सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने कचकच । स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचशुल्क आदि समेत जागीर दिने कम्पनीले नै गर्दिन...	बिस्तृतमा
दशैं २०७५ पनि सकियो । तर, दशैंको ह्याङ्गओभर अझै सिद्धिएको छैन । के प्राइभेट, के सरकारी कार्यालय सबैतिर न्यून कर्मचारीको उपस्थितिले दशैं नसिद्धिएको प्रष्ट पार्छ । अझ दैनिक पत्रिकाहरु दुब्लाएको देख्दा यो झन् स्पष्ट हुन्छ । विगतका भन्दा यसपालिको दशैं धेरै हिसाबले फरक र उत्कृष्ट रह्यो । सर्वप्रथम त चीनले ५५ किमीको सामुद्रिक पुल उद्घाटन गर्दै–गर्दा यता नेपालमा पनि दशैंमा बिजुलीबाट चल्ने बस काठमाडौंमा गुड्यो । बसको उद्घाटन गर्न प्रमसहित अर्थ, पर्यटन, व...	बिस्तृतमा
दशैंमा नयाँ गफ
काठमाडौंमा राम जाने र वाम आउने कुरा थियो ! अर्थात् रामवीरले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ७ को सांसदबाट राजीनामा दिएर वामवीरलाई सांसद बन्ने बाटो खोलिदिएका थिए । तर, त्यो बाटोमा वामदेव हिँड्न नसक्ने भएर योजना तुहिएछ । रामले नामका लागि यसो गरेका थिए, दामका लागि गरेका थिए वा विनाकामका लागि पछि थाहा हुँदै जाला । तर, वामदेव चुनावमा लड्नु अघि नै मैदानमा लडे । तर, अहिलेलाई गफ गर्न एक नयाँ विषय हाजिर भएको छ । जे होस्, अहिले देशमा जताततै कि दाम चलेको छ कि...	बिस्तृतमा
के छैैन र देशमा !
देशमा हत्या, हिंसा, तस्करी, कालाबजारी, दण्डहीनता, महँगी, अस्तव्यस्तता, बेरोजगारी, बेइमानी आदि मात्र छन् भन्ठान्नु भा’छ ? होइन नि, देशमा सरकार पनि छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त देशमा नयाँ संविधान छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका छन् । मिडिया र नागरिक समाज पनि छन् क्यारे ! अर्थात् देशका सबै अङ्गहरू छन् । सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालय छन्, विभाग छन् । मन्त्री छन्, उनका पीए छन् । उनीहरूका वरिपरि विज्ञ छन् । सल्लाहकार छन् ।...	बिस्तृतमा
हाम्रो जमानाका नायकहरू
सानो छँदा कुनै एउटा फिल्म हेरियो भने अर्को वर्ष अर्को फिल्म नहेरुञ्जेल त्यही फिल्मका बारेमा वर्षौंसम्म चर्चा चलिरहन्थ्यो । फिल्ममा नायकले यसरी डायलग हान्यो, उसरी फाइट खेल्यो वा भिलेनले कसरी बोल्यो, हिरोइनको सल कसरी हावामा उड्यो, उनी कसरी नाचिन् आदि विषयमा साथीभाइबीच खुब गफ चल्दथ्यो । तर, हिजोआज फिल्म हेरेको गफ कसैले गर्दैन । अहिले प्रायः चलचित्र हलहरु खाली खाली हुन्छन् । किन होला त भनेर बुझ्दा कुरा यस्तो पो आयो त ! हिजोआज फिल्ममा देखाइने राजनीतिक...	बिस्तृतमा
सामाजिक सञ्जालमा अहिले भारतको नक्साजस्तै देखिने ललितपुरतिरको एक सडकमा परेको खाल्डोको तस्वीर निकै भाइरल बनेको छ । पछि कसले हो त्यसमा श्रीलङ्कासमेत जोडेको देखिन्छ । यसरी नक्साजस्तै फोटोमै सही भारत पानीमा डुबेकोमा धेरै नेपालीले निकै खुशी व्यक्त गरेका छन् । यसबाट नेपालीहरू भारतप्रति कति असन्तुष्ट छन् भन्ने पनि देखाउँछ । यो नेपालीहरूमा रहेको भारतविरोधी ग्रन्थी मात्र हो या सरकारी निकम्मापनप्रतिको आक्रोश पनि ? जे होस्, एकछिनलाई मानौं भारत साँच्चै नै पान...	बिस्तृतमा
नयाँ ऐनको विरोध नगरौं
अहिले देशमा दुुई प्रकारका विषय हिट छन् । बाँकी सबै कुरा फाल्तु हुन् । त्यसमा पहिलो, कानूनी संहिताको नयाँ संस्करण मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र देवानी संहिता २०६४ जुन भदौ १, २०७५ देखि लागू भएकोमा केही मुठ्ठीभर मानिसको विरोध । दोस्रो, छोटे सरकार अर्थात् स्थानीय सरकारहरूले सोच (शौच होइन) कर अर्थात् मनले सोचेजति किसिमका लगाउन थालेकोमा विरोध । यी दुईबाहेक देशमा गर्नुपर्ने अरू कुनै काम, घटना, प्रसङ्ग क्यै नभएकाले पनि अहिले यी दुई कुरा मात्र चर्चामा आएका ह...	बिस्तृतमा